Nnianimu - MHAHS
Wo nim biribi?
Nsosoniee ben na eda HIV ne AIDS ntem?
Kwan ben na HIV yadee fa so sae?
ekwan ben na mefa so abɔ me ho ban afiri HIV ho?
Meye den na mahunu se me wɔ HIV?
Meye den na mahunu se obi wɔ HIV/AIDS?
Amanone akwantuo ne HIV/AIDS
Se wode w'asem befa nsem-ase-kyerefoɔ so
HIV ye moawa noa ede AIDS eba.
HIV/AIDS kye obiara, mfa ho ne wo mfie, nea wo honam te, baabi ko a wofi, anaa som ko a wosom.
Wiase afana nyinaa
Wiase mu nyinaa nipa beye opepe- pee aduasa nan (34,000,000) na ewɔ saa yadee HIV/AIDS yi bi. Saa nipa yi mu fa kesee no ara ye maa ne mofra.
HIV no titriw fa obaa ne obirama nna mu na esae
Australia man yi mu....
Nipa beye mpem-aduonu anan (24,000) na ewɔ saa HIV/AIDS yadee yi bi. Australia man yi mu ha,
HIV yadee no saee gyina marima ne marima nnaee mu titiriw. Mmom yadee no saee wɔ marima ne maa nnaee mu nso edɔɔso. Wiase mu nyinaa nso, marima ne maa nnaee mu titiriw na HIV yadee yi fa so sae.
Ekwan ahoro wo ho a ye sa HIV yaree yi , na ema nipa nso yin kye na ema nipa apomuden.
Se wode kodom ne obaa da anaa se wofa ne wo neto a, ana wo ne obi anfa mpanee anaa mfidie basabasa anwowo wo ho a HIV yaree no ntumi wo.
Wɔtaa twere anaa ɔbɔ HIV ne AIDS din bɔ mu se adee baako. Nanso nsosoniee da HIV ne AIDS ntem.
HIV gyina hɔ ma 'Human Immunodeficiency Virus'- eye yadee moawa a eko tia nipadua no ahobanbɔ biara a ewɔ ne mu mma n'ahoɔden so te. Se moawa yi bi kɔ nipadua no mu a, na ekyere se saa nipa no anya HIV.
HIV moawa no ko tia nipadua no ahobanbɔ a ewɔ no mu. Se w'ampe aduro anye a, moawa yi tumi see nipadua no ahobanbɔ biara kɔduru mpenpensoɔ bi a saa nipa no ntumi mɔ neho ban mfiri yadee biara ho. Yei ma yadee biara nya kwan wɔ nipadua no mu mma etumi de owuo mpo ba. eduru saa mpenpensoɔ yi a na yefre no AIDS anaa 'Acquired Immune Deficiency Syndrome'.
Se yeka se obi anya HIV a, na enkyere se wanya AIDS anaase saa nipa no reba abewu. empo se aduro-ye amma mu koraa, nipa bi nom a anya HIV tumi tena ase kye. Seesei koraa dee, aduro wɔ hɔ a etumi dwodwo HIV ano sedee ebyeye na entumi nane AIDS ntemtem. Se aduro- ye ba mu dee a, nipa pii a wanya HIV tumi tena ase nyini kye wɔ ahoɔden mu bɔ wɔn bra sedee efata.
HIV yadee yi yehu no wɔ mogya mu, nipa ho nsuo ene nufusuo mu. Obi a ɔwɔ saa yadee yi bi ho nsuo, ne mogya, anaa ne nufusuo kɔ obi foforɔ mu a, ema ɔno nso nya yadee yi bi.
HIV TUMI SAE wɔ saa kwan yi so:
Se obi ne obi beda na w'amfa kɔndɔm ammɔ ne ho ban.
Se obi ne obi de panee baako betwe nubɔne awowɔ wɔn ho.
Se wode panee a yemfa nuu aduro mu betwere anaa betuetue wo ho (tattooing).
ɔbaa pemfoɔ nso tumi de
HIV sae ne ba wɔ yefunu mu, awoye anaa nufusuo ma mu.
Mogya-mma mu nso HIV tumi sae (Australia ha, firi 1985, wɔhwehwe mogya biara a ɔde mma obi mu hunu se HIV moawa yi bi nni mu ansaana ɔde ama nipa ko).
HIV NTUMI NSAE wɔ saa kwan yi so:
Atere anaa prete baako mu adidie
Mpasotam korɔ so da
Tiafi baako so ne
Adwaree korɔ mu adware
Anaase wobesɔ obi mu keke.
Ntumoa bi tese ntontom mfa HIV mma.
Wɔ nna afa mu
HIV moawa no nam ekuro anaa epira nketenkete bi a ebetɔ ɔbaa ase, ɔbarima kɔte ho anaa ne to na esae nipa. HIV tumi sae bere a obi a moawa no bi wɔ ne mogya mu ne obi foforɔ beda na wamfa kɔndɔm ammɔ wɔn ho ban.
Sedee ebeye na wonya HIV ara ne se, Wo bebɔ wo ho ban Wɔ nna mu. Bere biara a wobefa obi, se wobefa no wɔ nanim anaa ne to, hwe se wobehye kɔndɔm na wode nku-nsuo (KY jelly anaa Wetstuff) befefa bea ko ama ehɔ aye toro ansaana wafa no. Saa banbɔ yi nso bebɔ wo ho ban afiri nyarewa ahodoɔ bebiree a yenya firi nna mu no ho.
Kwan a yefa so hye kɔndɔm
1. Fa ntoboasee te kɔndɔm kotokuo no ano na w'ante kɔndɔm no ankasa mu.
2. Kyim kɔndɔm no ti wɔ wo nsa ntem sedee mframa a egyina mu no bepue. Afei pia kɔndɔm no hye kɔtee no ho ma no nkosi asee pee.
3. W'ahye kɔndɔm yi awie no, fa nku-nsuo (water- based lubricant) fa ho.
4. Sɔ kɔndɔm no mu wɔ kɔtee no ase bere a wo ne onipa ko ada awie a woretu afriri mu no sedee ebeye na wo ho nsuo no mpue abɔnten.
5. To kɔndɔm no twene. Ensane mfa hye bio.
Nubɔne panee wowɔ ne honam ani tuetue (tattooing)
HIV tumi sae bere a obi ne obi bekye panee baako, anaa yede panee a yede atuetue obi honam ani dada betuetue nipa foforɔ honam ani.
Sedee ebeye na wonya HIV bere a worewowɔ wo ho nubɔne:
ene obi nkye panee ne awowɔadee a yede twe nubɔne wowɔ biara. Sedee ebeye na wonya HIV bere a woretuetue wo honam ani:
Kɔ honam ani-tuetue bea papa a ɔwɔ abodin krataa wɔ homan ani-tuetue mu na afei mpanee a ɔde ye adwuma no nso, ɔwie a ɔtugu, anaa ɔnoa mu yie ansaana ɔde aye adwuma bio.
Nneema yeinom ye nso bebɔ wo ho ban afiri nyadewa foforɔ bi te se, 'hepatitis B' ne 'hepatitis C' ho.
Obaatan de resae ne ba
Obaa pemfoɔ a ɔwɔ HIV betumi de asae neba a ɔda yefono mu, bere a wakɔ awoɔso, anaa bere a wawo abofra no awie na ɔrema no nufusuo. Seesei dee mmaa pii a ɔwɔ HIV tumi wo mofra a wɔn ho ye den, se wɔnya aduro nom bere a wɔnyem abofra noa.
Se wo ye ɔbaa pemfoɔ a wowɔ HIV yi bi, anaa wo ye ɔbaa a woredwene awoɔ ho a, kɔne wo 'dokota' nkasa ntempa yi ara. enam se HIV moawa yi wɔ nufusuo mu nti, Australia ha wɔmma ho kwan ma mmaatan a ɔwɔ HIV mma wɔn mofra nufusuo. Kwan papa a ɔfaso ma mofra aduane pii wɔ hɔ.
Mogya twe-kye anaa mogya nneema biara
Wɔ Australia ha efiri afe 1985 reba, wɔhwehwe mogya ne mogya nneema biara mu hwe hunu se HIV biara nni mu. Nipa a ɔwɔ HIV ntumi ntwe mogya nkye. Nanso amanone aman pii so mogya twe-kye daso ye adee bi a eye hu yie.
Se biribi kyere w'adwene a fre Se wope se wone yen kasa wɔ saa nsem yi ho wɔ wo kurom kasa mu a, fre saa ahoma- trofoɔ yi 131450. Se wofre a, bisa se wɔma wo nsem-ase- kyerefoɔ (interpreter) na se nsem-ase-kyerefoɔ yi ba ahoma no so a, ma no mfre ahoma- trofoɔ ko a wope ma wo. Yei bema w'atumi aka wo kromu- kasa afa nsem-ase-kyerefoɔ yi so.
Wo betumi ahunu se wanya HIV bere a w'akɔhwehwe wo mogya mu. Mpen pii yehunu HIV moawa yi bosome miensa ntem bere a obi anya yadee yi bi no. etɔ dabi a wɔtumi ma wo kɔhwehwe wo mogya mu ne mprenu so, ansaana wasi so dua se w'anya HIV yi bi.
Saa mogya nhwehwemu yi woye no wɔ ayaresabea a ehwe nna apomden so biara mu wɔ Australia afanaa nyinaa -wɔngye sika biara. Wo kɔ saa ayaresabea hɔ a, eho nhia se wobebɔ wo din anaa wo wɔ 'Medicare card'. Saa mogya nhwehwemu yi nso wobetumi aye no wɔ wo dokota hɔ.
Wɔhye bɔ se obibiara nte wo HIV mogya nhwehwemu yi mu asem. Asekyere ne se, asem biara a efa wo ho a apomden adwumayefoɔ anaa akuoakuo a eye HIV/AIDS ho adwuma nsa beka ye kokoamu-asem, obi nte bi gye se w'ama ho kwan se wɔnka nkyere obi ansaana w'atumi ada no adi.
Worentumi mfa w'ani keke nhunu se obi wɔ HIV/AIDS
Nipa dodoɔ no ara a ɔwɔ HIV moawa yi bi wɔ ahoɔden, na bribiara nkyere se ɔwɔ moawa yi bi. ebetumi adi mfie bebiree ansaana AIDS yadee yi ayi ne ho adi. Nipa pii wɔ hɔ a ɔwɔ HIV moawa yi bi, nanso wɔnim mpo se ɔwɔ bi.
Wuutu kwan ako amanone
HIV/AIDS wo oman biara so ewo wiase afanan yenaa so. Se wore tu kwan a fa kondom ne nku a wode be popa wo ho ansa na woneobi ada.. Ene obi nfa panee baako nnwo moho. Se wode kondom ne pane foforo bo w oho ban a ebeboa wo senea wonya HIV/AIDS yaree no bi.
Wo betumi anya obi a obekyerekyere nsem mu ama wo se wone apomuden asuafoo adwumayefo ekasa a.
Nsem ase akyerekyerefoo betwumi aboa wo wo
Wobe kyere kyere wo biibiiaa ase
Nea wobeka biara wote asee
Bisa nsem na wonkyere kyere wo mu
Ma kwan na yennye wo nsohwe nsa wo yaree
Nsem ase akyerekyere foo wo mmra se wasem biara keka kokoamu a obiara ente Bisa asemakyerekyerefoo ase se wo hyia apomdenfoo adjumayefoo a Telephone akyereuyerefoo (TIS oman nu nyinaa) ewo Australia baabiara Fre 131 450 (ne boo ye foofoofo) na kasa a wope no ye de wo ato so akasa .